WordPress: ဗားရှင်း ၅.၂ အသစ်နှင့် WP နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားအရာများ | Linux မှ
WordPress: ဗားရှင်း ၅.၂ အသစ်နှင့် WP အကြောင်းများစွာ
WordPress - ထူးခြားချက်များ၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
WordPress (WP) နှင့်ပတ်သက်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ပို့စ်တွင်«အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ကို အခြေခံ၍), အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (သို့) CMS ကိုWordPress: CMS ဆိုတာဘာလဲ။ Utility နှင့် Features» ကျွန်ုပ်တို့သည် CMS ဆိုသည်ကိုနက်နက်နဲနဲစူးစမ်းလေ့လာပြီး WP သည်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည်။
ယခု ဤစာစောင်တွင်လက်ရှိ WP (Gutenberg) နှင့်၎င်း၏ဖြန့်ချိသောဗားရှင်းအသစ် (၅.၂) ကိုမှတ်ချက်ပြုပါမည်။၊ ၎င်း၏ယေဘူယျဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ (လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ရွေးချယ်စရာများနှင့် module များ) နှင့်၎င်း၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအခြေခံအဆင့်များ။
2 WordPress: လက်ရှိဗားရှင်း
2.1 WordPress ကိုကဘာလဲ?
2.2 Gutenberg: လက်ရှိဗားရှင်း
2.3 WP ကို ​​update ၏အားသာချက်များ
2.4.1 interface အသစ်
2.4.2 Traditional Interface (WP Admin)
2.5 တပ်ဆင်မှုနှင့် configuration
2.6 WordPress အစားထိုး
ဒီဆောင်းပါးသည်ယနေ့ WP ဖြစ်သော CMS တွင်ရရှိနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ရွေးချယ်စရာများနှင့် module များအတွက်တစ်ခုချင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းသောလမ်းညွှန်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်စွာပင် WP အတွက်ရိုးရှင်းသော်လည်းပြီးပြည့်စုံသောအသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းအတွင်းရှိသွင်ပြင်လက္ခဏာအမျိုးမျိုး၏အသုံးပြုမှုကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ရန်နှင့်ဤကိရိယာကို အသုံးပြု၍ မွမ်းမံရန်လွယ်ကူစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
စိတ်ကူးသည်ဤထုတ်ဝေမှုသည်သေးငယ်သော်လည်းကောင်းစွာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောအစသို့မဟုတ် WP နှင့်ပတ်သက်သော FromLinux ဘလော့ဂ်ဟောင်းနှင့်အနာဂတ်ဆောင်းပါးများကိုဖြည့်စွက်သည်။တည်ရှိပြီးဖြစ်သောတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုယုံကြည်စွာအခြေခံခြင်း။ WP သည်ဘာသာစကားများစွာနှင့်အထူးသဖြင့်စပိန်ဘာသာတွင်လက်ရှိအသုံးပြုသူအသင်းအဖွဲ့ပါ ၀ င်သည်။ မည်သည့်ပိုအဆင့်မြင့်သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဗဟုသုတများစွာရှိသောစာရင်းရှိပြီးအထူးသဖြင့်ရရှိနိုင်သည် စပိန်ဘာသာဖြင့် WP.
ထို့ကြောင့် ၎င်းသည်တိုတောင်းသော်လည်းထိရောက်ပြီးထိရောက်သောလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်သင်ခန်းစာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် လက်ရှိ tool အသစ်နှင့်အနာဂတ် WP သုံးစွဲသူများအားဤကိရိယာ၏ဗဟုသုတနှင့်အသုံးပြုမှုကိုကူညီရန်။
WP သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ လုံခြုံမှုနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုကိုအလေးပေးသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပြီး၎င်းကိုယနေ့လူကြိုက်အများဆုံး CMS ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပို့စ်တွင်အောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည်။
WP သည်ခိုင်ခံ့သော CMS ဖြစ်ပြီးဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ အခမဲ့ဖြစ်သည်။သို့သော်၎င်းသည်လူသိများသောအလွန်များပြားလှပြီးအခမဲ့ဖြစ်ပြီးလစာကောင်းသောဆိုဒ်ကိုထုတ်ဝေခြင်းနှင့် hosting ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည် "WordPress.com" အရာအလွန်မကြာခဏ updates များကိုလက်ခံရရှိသည်။ ၎င်းတွင်လူသိများသောအခြားအစ်မဒိုမိန်းလည်းရှိသည် "WordPress.org" စပိန်ဘာသာနဲ့လည်းရနိုင်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အလွန်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှိသည်။
နောက်ပြီး WP သည်အောက်ပါနည်းပညာများဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
ယနေ့ WP သည်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုသည် PHP၊ y က MySQL Database Manager (DB) အနေနှင့် နှင့် Apache ဝန်ဆောင်မှုနိမ့်အဖြစ် GPL လိုင်စင်။ ထို့ကြောင့်၊ လျှောက်လွှာသို့မဟုတ် SW ကိရိယာသည်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီသည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် (CA) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (SL).
WordPress - ထူးခြားချက်များ
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဘလော့ဂ်များဖန်တီးရန်အလွန်ကောင်းမွန်သော CMS ဖြစ်သည်ဟုမှန်ကန်စွာပြောနိုင်သည်။၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများသို့မဟုတ်ကောင်းကျိုးများအနက်မှတစ်ခုမှာ ၄ င်း၏သတင်းအချက်အလက်များစွာကိုရရှိနိုင်၊
ထို့အပြင်၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အောင်မြင်သောဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ရှိပြီးသူတို့၏အချိန်၊ ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအထောက်အကူပြုသောထိရောက်သော "ကမ္ဘာအဝန်း" ကိုတာဝန်ခံသည်။ WP ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်စေရန်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောဒီဇိုင်းနာများ၊ developer များနှင့်ဘလော့ဂါများသည် blog post များ၊ သင်ခန်းစာများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုများနှင့်ထောင်နှင့်ချီသော themes များနှင့် plugins များမှတဆင့် WP နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတကိုမျှဝေသူများဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ဝေခဲ့သော WP ကို ​​၂၀၀၃ ခုနှစ်မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ၀.၇ အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးလက်ရှိ 0.7 Gutenberg အထိရရှိခဲ့သည်။ ဤအချက်က WP သည်ခိုင်မာသောနှင့်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူရင့်ကျက်။ ခိုင်မာသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစေသည်။2ကိုမေလ ၇ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့မှရရှိနိုင်မည့် WordPress ၅.၂ အတွက်လာမည့်ဒုတိယမြောက် version2(RC5.2) ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြသော Evolution
ယခု version အသစ်၏ 5.2 သည် WP မှ configuration ပြproblemsနာများနှင့်ဆိုးဝါးသောအမှားများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ကိရိယာများကိုပေးလိမ့်မည်ဟုကတိပြုသည်။ developer များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်းသို့မဟုတ် site တစ်ခုစီမံခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သူတို့လိုအပ်သည့်အခါမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်လွယ်ကူစေသည်။
၎င်းသည်၎င်း၏ Site Health Protection နှင့် PHP Error Protection tools တို့တွင်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များလည်းပါ ၀ င်လိမ့်မည်။စီမံခန့်ခွဲသောဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပလပ်ဂင်များသို့မဟုတ်အခင်းအကျင်းများပြwithနာများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုပိုမိုရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်သင်၏ dashboard တွင်ရရှိနိုင်သည့် icon အသစ်များနှင့်အထောက်အကူပြုသောနည်းပညာများအသုံးပြုသောမည်သူမဆိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။
ဗားရှင်း ၅၀ မှစ၍ WP သည် "Gutenberg" ဟုခေါ်သော visual editor အသစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ WordPress မှတစ်ဆင့်အကြောင်းအရာများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်နည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသူမည်သူမဆိုသည် third-party themes များသို့မဟုတ် plugins များကို ၀ ယ်ယူရန်မလိုဘဲ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဘလော့ဂ်များကိုလွယ်ကူစွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရုံသာမကတည်ဆောက်နိုင်သည်။
WP ကို ​​update ၏အားသာချက်များ
အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုစီသည်များသောအားဖြင့်အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်ဥပမာ - တိုးတက်မှုများ၊ အပြောင်းအလဲများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်များသို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်း။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဆိုရလျှင်၎င်းတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းခွဲနိုင်သည်။
ကုဒ်၏ Optimization (မြန်နှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း)
အမှားအယွင်းများအတွက်ဖြေရှင်းချက်များ (bug များ) ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
၎င်းနှင့်အခြားအသေးအဖွဲအကျိုးကျေးဇူးများသည် WordPress ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံရန်အရေးကြီးသည်။ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး, အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိသည်နှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့နည်းပညာခေတ်မီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။
လောလောဆယ် WP သည်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူအောက်ပါစီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။
Traditional Interface (WP Admin)
အားလုံး entries တွေကို
ရရှိနိုင် tools များ
နောက်ပိုင်းတွင် WP နှင့်ပတ်သက်သောအခြားပို့စ်တစ်ခုတွင်ဤကဏ္,များ၊ module များ၊ ရွေးချယ်မှုများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်လေ့လာပါမည်။
WP နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ပို့စ်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း FromLinux ဘလော့တွင် WP ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုသင်ကြားပေးသောဆောင်းပါးများရှိပြီးဖြစ်သည်၊ ၏တရားဝင်သတင်းအချက်အလက် WordPress ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် WP ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း။ ၏တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်ချိတ်ဆက်အပြင် WP Multisite Installation အတွက် WordPress Codex။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှခေတ်နောက်ကျသွားသောဤ entries တွေကိုဖြည့်စွက်နိုင်ရန်အတွက်။
ယနေ့စျေးကွက်တွင် WP အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ တချို့ကပိုကောင်းအချို့နှင့်အခြားသူများမဟုတ်ဤမျှလောက်။ သူတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သည်
နောက်ပိုင်းတွင် "အွန်လိုင်းဘလော့တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များ" ၏အခြားပို့စ်တွင်ဤနှင့်အခြားရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင် WP ဟာ CMS ကောင်းတယ်ဆိုတာပြောနိုင်တယ်အဓိကပရိုဂရမ်းမင်းဗဟုသုတမရှိပဲ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏အကြောင်းအရာနှင့်အသွင်အပြင်ကိုအလွယ်တကူစီမံနိုင်သည်။ ဘယ်ဟာကမ္ဘာအနှံ့အသုံးအများဆုံးအကြားတစ် ဦး ကိုခံထိုက်သောအနေအထားကိုသိမ်းပိုက်ဖို့က ဦး ဆောင်လျက်ရှိသည်။
ထို့အပြင်၎င်း၏လိုင်စင်သည် GPL ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုပေးစရာမလိုဘဲအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။အခြားသောအရည်အသွေးရှိခြင်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးတူသော CMS နှင့်မတူသည်။ ၄ င်း၏ဒေသဆိုင်ရာ (ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွင်) သို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားသူများနှင့်အဓိကကွာခြားချက်များကိုမှတ်သားလေ့ရှိသည်။
Plugins၊ Themes နှင့်အခြားဖြည့်စွက်မှုများ (လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုရေးသားခြင်းဖြင့်) WP ကိုထူးခြားတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်စေတယ် နေ့တိုင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာကြီးထွားလာပြီးအပြည့်အဝတိုးချဲ့နိုင်စွမ်းရှိတယ်။
၎င်းမှာပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်နှင့်စီမံရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသောဗားရှင်း ၅.၀ ကိုထုတ်ပြီးကတည်းက interface အသစ်တစ်ခုနှင့်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောကြီးမားသည့်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အမှားများသို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများကိုဖြေရှင်းရန် WP နှင့်ပတ်သက်သောအကြံဥာဏ်များနှင့်အကူအညီဆောင်းပါးများကိုလွယ်ကူစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » WordPress: ဗားရှင်း ၅.၂ အသစ်နှင့် WP အကြောင်းများစွာ
5G နည်းပညာသည် Kubernetes ပေါ်တွင်မူတည်သည်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည် Q # compiler နှင့် quantum simulators တို့ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်